China Eco-Friendly ukuba ngumtya Bag Umqhaphu Bag Umtya ukuTsala Umtya Cosmetic Bag yoMvelisi kunye noMthengisi | Zhihongda
I-Eco-Friendly Bag yokutya umqhaphu Isipho seBhegi yokuTsala Umtya weCosmetic Bag
Ezenziwe ngesandla e-China zikwindawo zethu zakudala zomqhaphu iingubo zelaphu ezinomtya wokutsala. Isetyenziselwa iminyhadala yezemidlalo, izipho okanye isipho sokunyusa kwiinkampani. Iingxowa zethu zikumgangatho ophezulu kwaye ziyahlambeka. I-logo yakho okanye i-slogan inokuprintwa ngqo ebhegini enemibala yomthi yerabha engenatyhefu. Ubungakanani bunokulungiswa buceliwe ngumthengi. Ingxowa inokusetyenziswa njengobhaka kwaye iyasebenza. Iintambo zomqhaphu ezomeleleyo zinokuvala umphezulu.
1.Zenziwe ngesandla e-China zikwangumbala wethu weklasikhi wempahla eyolukiweyo enomtya wokutsala. Isetyenziselwa iminyhadala yezemidlalo, izipho okanye isipho sokunyusa kwiinkampani. Iingxowa zethu zikumgangatho ophezulu kwaye ziyahlambeka. I-logo yakho okanye i-slogan inokuprintwa ngqo ebhegini enemibala yomthi yerabha engenatyhefu. Ubungakanani bunokulungiswa buceliwe ngumthengi. Ingxowa inokusetyenziswa njengobhaka kwaye iyasebenza. Iintambo zomqhaphu ezomeleleyo zinokuvala umphezulu.
Ukusetyenziswa: Isipho sokunyusa, ibhegi yezemidlalo, ibhegi yesikolo, ibhegi yesipho
3.Yenziwe ngesandla, eco-friendly, ukutsala umtya kunye nenqaku lokuthwala njengobhaka, ukuprinta ilogo
4.Yenza ngokwezifiso: Siza kuprinta uphawu lwakho kwibhegi nganye, ubungakanani kunye nombala ungenziwa ngokwezifiso ngokunjalo
Igama lomxholo I-Eco-Friendly Bag yokutya umqhaphu Isipho seBhegi yokuTsala Umtya weCosmetic Bag
Egqithileyo Ibhegi yokuhombisa yomntu eyenzelwe wena yokugcina ibhegi yomtya webhegi yangasese
Okulandelayo: Ibhegi yokutsala umbala wendalo ongenanto umqhaphu umtya ojikelezayo epokothweni i-canvas bundle ipokotho inokuprinta ilogo
Umqhaphu Heavy Duty Gusseted Shopping Tote Black ...
I-Plain yeCalico Grocery engenanto yeCotton Organic ...
Ihowuliseyili organic 100% yomqhaphu siko eshicilelweyo ku ...
Zenziwe ngokutsha ngelaphu ngelaphu ngelaphu tote izibambo w ...
Custom logo ezinkulu iingxowa lokuthenga reusable t w ...
Ibhegi yokutsala umbala wendalo ongenanto umqhaphu utsala ...